Voafafa ve ny Skype-ko? - Skype
Tena > Skype > Voafafa ny kaonty Skype - vahaolana pragmatika
Voafafa ny kaonty Skype - vahaolana pragmatika
Voafafa ve ny Skype-ko?
rehetraSkypeny kaonty dia kaonty Microsoft na nahavita fifindra-monina na tsia. Araka ny antontan-taratasy, Tsy misy ny Kaonty Microsoft, ny kaonty tsy miasanofafanatoy izao manaraka izao. Raha ny fotoana farany nidiranao dia ...
Manao ahoana daholo! Ity lahatsoratra ity dia momba ny fomba hanarenana ny tantara voafafa, ny rakitra nalefa, ny fifandraisana ary ny teny miafina ao amin'ny Skype.
Fomba voalohany. Mamorona backup data fanomanana Skype ary ampiasao izany ho fanarenana. Mandehana any amin'ny Fitaovana / Safidy / Tsiambaratelo / Fikirakirana ny fiainana manokana.
Tadiavo ny fizarana 'Tazomy ny tantara ho an'ny' ary safidio ny vanim-potoana itehirizana azy ao amin'ny menio miseho. Safidio ny 'Mandrakizay' ary kitiho ny 'Save'. Ankehitriny dia voatahiry foana sy feno ny tantaran'ny chat.
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny tantaran'ny chat rehetra, ny rakitra nalefa sy voaray dia ataovy izao: Akatony Skype. Mandehana any amin'ny folder C: Users username AppData Roaming Skype. Ity fampirimana ity dia misy ny angon-drakitra Skype rehetra, ao anatin'izany ny kaonty rehetra izay niditra an-tsehatra tao amin'ny Skype avy amin'ity solosaina ity, ny safidy mety indrindra dia ny fanaovan-tsindry ny fampirimana manontolo.
Adikao amin'ny flash drive ohatra ireto rakitra ireto. Vonona. Rehefa avy nametraka ny rafitra fiasa na mamolavola ny kapila mafy ianao dia mora be ankehitriny ny mamerina ny tantaram-chat ary koa ireo rakitra nalefa sy voaray izay efa teo tamin'ny fotoan'ny famoronana, ny sisa ataonao dia mamerina ireo rakitra ireo ao anaty fampirimana C: Users username AppData Roaming Skype rehefa avy nametraka Skype.
Fomba faharoa. Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tantaran'ny chat, ny fandraisana ary ny fandefasana rakitra, ary koa ny fidirana amin'ny kaonty raha tsy misy backup data Skype. Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tantaran'ny chat chat Skype Aorian'ny fametrahana ny rafitra fiasa na ny rindranasa mihintsy, ary rehefa manomboka azy io ianao amin'ny voalohany, dia hampidina avy hatrany ny ampahany amin'ny tantaran'ny chat sy ny angon-drakitra mpampiasa azy izay voatahiry ao anaty rahona ny Skype.
Mandrakotra ny 30 andro farany ity data ity. Ka inona no tokony hataonao mba hamerenana amin'ny laoniny ny tantaran'ny Skype nandritra ny 30 andro lasa? Tokony hosoloinao ilay fisie main.db efa misy, izay hita eto: C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype, miaraka amin'ilay fisie izay mirakitra ny tantaran'ny Skype rehetra.
Mba hahazoana rakitra toy izany dia andao hamerina ny rakitra tantara Skype avy amin'ny kapila mafy izay nametrahana ny kopian'ny programa niaraka tamin'ny tantara rehetra teo aloha. Mihazakazaha Hetman Partition Recover ary zahao ny kapila mafy k. Kitiho ny bokotra 'Wizard' naoty.
Raha mila mamerina amin'ny laoniny ny tantaran'ny Skype ianao aorian'ny famafana ny programa sy famerenana azy io dia ampy ny scan scan ny kapila mafy. Raha napetraka indray ny rafi-piasa ary / na efa namboarina ny kapila mafy dia alao scan ny data data miaraka amin'ny famakafakana feno. Amin'ity tranga ity dia misafidy famakafakana feno aho.
audio skopp choppy
Raha te hahita haingana kokoa ny fisie dia ampiasao ny asan'ny fikarohana: tsindrio fotsiny ny kisary fanamafisam-peo eo an-jorony ambony ankavanan'ny efijery, ampidiro ny anaran'ny rakitra ao amin'ny Fikarohana File 'ary kitiho ny' Fikarohana '. antsoina hoe 'main.db' ary hofidiko ilay manana daty famoronana tranainy indrindra ary hamerina azy io.
havaozina ho ie10
Mariho, mila ny anaran'ny fisie avy amin'ny tantaran'ny chat ianao hahafantatra fa mila mamerina ianao. Avy eo adikao ity fisie ity ao amin'ny folder 'My Skype Receives Files', izay hita eto: C: Users UserName AppData Roaming Skype Ireo fisie azoko Skype. Amin'ity fomba ity, ny tantaran'ny chat Skype dia mampiseho rakitra efa nandefa sy nahazo rakitra izay very noho ny fametrahana indray ny Skype na Windows na ny famolavolana ny kapila mafy. Mba hamerenana ny fidirana amin'ny kaonty Skype hamerenana ny fidirana amin'ny kaonty Skype very na hadino , azo averina amin'ny laoniny toy izao ny fidirana: Alohan'ny anaovanao izany dia tokony hanitsy ny toe-javatra fandaharana ianao mba hihazakazaky ny mandeha ho azy ny Skype nefa tsy manamarina ny fidirana sy ny teny miafina, dia manomboka amin'ny maody ara-dalàna i Skype.
Matetika io safidy io dia alefa amin'ny toerana misy anao, ka tsy tokony hanana olana ianao. Ianao izao dia mila ny rakitra config.xml, izay misy ny angon-drakitra fidirana sy teny miafina ho an'ny mpampiasa.
Azonao atao ny mahazo ity rakitra ity amin'ny backup, ary amin'ny ampahany voalohany amin'ity lahatsoratra ity dia nasehoko ny fomba fanaovana azy. Aorian'izany, adikao ary soloino ao amin'ny folder C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype. Raha tsy misy backup Skype, azonao atao ny mamerina an'io rakitra io amin'ny fomba mitovy amin'ny fisie main.db na mahazo ary mandefa rakitra Skype - miaraka amin'ny fanampian'ny Hetman PartitionRec Recovery.
Izay ihany aloha. Misaotra mitady. Manantena aho fa hahasoa anao ity lahatsoratra ity, raha tianao ity lahatsoratra ity azafady tsindrio ny bokotra 'Like' etsy ambany ary misoratra anarana amin'ny fantsonay hahitanao bebe kokoa.
Inona no mitranga rehefa mamafa ny kaonty Skype anao ianao?
nyvokatry ny fanakatonanaKaonty Skype
Famafana ny kaontymanala mandrakizay ny angona rehetra mifandraika amin'izany, ao anatin'izanyny Skype anaofifandraisana, fividianana ary tantaram-pifandraisana. Nilaza i Microsoft fa mety haharitra 30 andro nynyanarana hanjavonany Skypelahatahiry aorian'nyny kaontymihidy.25 jona 2018
Tongasoa eto amin'ny Tutorial Video Prediction, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba hamafana ny kaonty Skype anao, araka izay hahasarotra ny hamafana ny kaontinao, noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba manaraka na manaraka handehanana mankany hamafa kaonty Skype ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamafa ny mombamomba ny Skype.
Azoko atao izany amin'ny fampiharana amin'ny birao, raha miditra amin'ny rindrambaiko birao Skype ianao, kitiho ny Skype eo ankavia havia, avy eo apetraho eo akaikin'ny mombamomba anao ny totozy ary safidio ny Hanova ny mombamomba anao ary ampidiro ny pejin'ny fampahalalana momba ny mombamomba anao amin'izay azonao atao hamafa ny zava-drehetra, tsindrio fotsiny ny piraofilina feno dia tokony ho hitanao izao izay azonao nofafana. Ny hany zavatra tsy azonao hamafana mora kokoa dia ny anarana Skype izay eo an-tampony, fa azonao atao ny mamafa ny zavatra hafa rehetra, ao anatin'izany ny adiresy mailakao, ny firenenao, izay tsy azonao hamafana, azonao atao ny manova ny soatoavina ao anaty lahatsoratra sahan'asa iray hafa hasolo dom domain soatoavina araka izay azo atao mba hamafana ireo kaonty skype anao, mijanona ny solonanarana, saingy boky toy izany ianao ary azonao esorina koa ny sarin'ny piraofilinao raha nanana ianao. Tsy azoko antoka raha miasa i Moshelight, fa raha ny filazan'ny olona sasany, raha soloinao miaraka aminy ny adiresy mailakao dia ho voafafa afaka 14 andro ny kaontinao, azonao atao izany sy ny rindranasa birao, na afaka mankany amin'ny Skype ianao Raha vantany vao miditra ianao, tsindrio ny anaranao Skype avy eo ambanin'ny Fampahalalana ho an'ny tena manokana tsindrio ary ankehitriny dia afaka mamafa vaovao marobe bebe kokoa ianao eto, toa ny anarana amin'ny fanesorana afaka mamafa ny zava-drehetra raha vao ianao Vita fotsiny dia tsindrio Save Now.
Zavatra farany iray, raha mampiasa fidirana ankolafy fahatelo ianao toa ny Twitter na Facebook na Microsoft hisoratra anarana amin'ny kaonty Skype dia azonao atao ny manafoana ny fidiran'ny Skype amin'ireo kaonty ireo, ohatra raha mampiasa Facebook ianao dia afaka mandeha mankany amin'io fidinana io zana-tsipika midina eo amin'ny pejy fanoroana tsindrio eo amin'ny toerana misy anao tsindrio ireo apps dia tadiavo ilay kisary skype ary rehefa hitanao ilay kisary skype dia hahita bokotra X eo akaikin'ny skype ianao dia azonao atao ny manindry azy raha te handefa ny fidirana Skype hanafoana ny Facebooko ianao. Raha mampiasa Twitter ianao hiditra amin'ny Skype, mandehana fotsiny amin'ny Twitterweb Tongava ary misoratra anarana avy eo dia azonao atao ihany koa ny mankamin'ny pejy Settings amin'ny kaonty Twitter anao amin'ny fipihana eo amin'ny sary ny mombamomba anao. kitiho ny Apps hahitanao ny lisitry ny rindranasa rehetra izay manana fidirana amin'ny kaonty Twitter anao, tadiavo ny Skype ao ambaniny, avy eo kitiho ny Revoke Access hisorohana ny Skype tsy hiditra amin'ny kaontinao Ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia mamafa ny piraofilinao Skype na kaontinao. manana questi hafa ons na hevitra, azafady azafady mandefasa azy ireo eo amin'ny sehatry ny fanehoan-kevitra etsy ambany ny lahatsoratra ary aza adino ny manoratra ny anarako dia Chris avy amin'ny lozisialy fanoherana.
sarintany tranokala visio
Ahoana no ahalalanao fa nisy nanafoana ny kaonty Skype azy?
Mbafantaro raha misynanala anao tamin'nySkype azy ireolisitry ny fifandraisana dia ataovy izao: Tadiavo ilay olona ao amin'ny olona ifandraisanao. Rehefa hitanao io olona io dia ho hitanao eo akaikiny ilay kisarynyanarana (na amin'nynysary mombamomba azy) volondavenona misy marika fa tsy marika maitso.
Amin'izao vanim-potoana izao dia manjary tena misy ny heloka bevava amin'ny cyber ary toa sahiran-tsaina isika rehetra amin'ny maha-azo antoka sy azo antoka antsika amin'ireo teknolojia vaovao ananantsika.
Mety ho sarotra izany, mety ho sarotra ny hahafantatra azy, saingy nisafidy ny hanangona zava-misy mahasoa vitsivitsy izahay izay afaka manampy anao rehefa tandindomin-doza ny fiainanao manokana. Fa maninona ry zalahy Jimmy eto, tongasoa eto amin'ny ekipa alina, ireto no folo voalohany ary tsy misy ifandraisany amin'ny lahatsoratra momba ny lalao sy ny quiz ary ny toetrany. Avy aiza ny fonon-tanana ary ny atiny ara-bakiteny fotsiny no heveriko fa mahafinaritra.
Ka raha anisan'ity antokon'ny alina ity ianao dia alao antoka fa tianao ilay lahatsoratra, velomy ny fampandrenesanao sao diso adika ianao, misoratra anarana amin'ny fampandrenesanao hanomezana anao ny fotoana tsara indrindra hahitanao ny lahatsoratra rehetra, indrindra ireo dia navoaka tara be vao niditra an-tsehatra. Inona no tsara kokoa noho ny $ 50 Amazon Gift Card? Ahoana ny dimy amin'izy ireo amin'ny vola mitentina $ 250 sy mpandresy dimy, niara-niasa tamina fantsona tsara hafa aho tamin'ny volana aogositra mba hanao an'ity sakamalaho ity ho anao ry zalahy. Link dia eo amin'ny famaritana, misy fomba enina handraisana anjara, maimaim-poana tanteraka izany ary amin'ny faran'ny fifaninanana dia manome karatra fanomezana Amazon dimy mitentina 50 $ hatramin'ny mpandresy dimy vintana.
Ka manantena aho fa farafaharatsiny mba ho tonga ny iray amin'ny Chaos Team. Miditra ianao ary mirary soa. Ankehitriny, andao mankany amin'ny fomba folo hahitana raha voajirika tokoa ny solosanao.
Aza mahazo paranoida be na zavatra hafa, aleo ...
andao hiara-hamaky an'ity isika. Andao atomboka amin'ny laharana folo ny lisitra: tsy mandeha ny rindrambaiko antivirus anao. Ny famantarana manan-danja voalohany hanananao dia ny miditra amin'ny fikirakirana ny solosainanao ary mijery ny rindrambaiko antivirus anao.
Ara-dalàna ny zava-drehetra: tokony ho eo ny antivirusanao ary manao izay tokony ho izy. Ny famantarana lehibe fampitandremana fa mety hampidi-doza ny solosainao dia rehefa tsy mandeha tsara ny rindrambaiko ary tsy narianao mihitsy izany. Tsy manao irery izany, mampanantena aho.
Ny fanafoanana ireo programa antivirus dia matetika no zavatra voalohany hataon'ireo mpijirika raha vao miditra an-tsokosoko ao anaty solo-sainanao izy ireo, satria hanamora ny fitetezana ny solosainao sy ny mombamomba anao izany. Ary ny isa sivy dia mandray hafatra virosy sandoka ianao. Fomba iray hanandraman'ireo mpijirika hampiditra anao amin'ny tanany ny fandefasana aminao ity sandoka kely ity: 'Voasintona ny solosainao, kitiho eto raha hamboarinao'.
Na ny sasany amin'izy ireo aza dia manana bitsika am-bava. Raha mandeha tsara ny antivirusanao dia tokony hisorohana ny fidiran'ny olona mivantana amin'ny solosainao izany. Izany hoe raha tadiavin'izy ireo ny mombamomba anao dia mila mitodika any aminy ianao.
Ireo hafatra virosy sandoka no fomba fahita indrindra hackeran'ny olona ny solosainy rehefa manindry ny hafatra izy ireo satria manahy. Fa raha tokony hanampy dia manome hacker fidirana amin'ny solo-sainanao izany, toy ny hoe mitondra anao any an-tranonao avy eo ary manokatra ny varavarana fidirana jiolahim-boto ary manome ny lakileny ary miteny hoe: 'Afaka miditra eto foana ianao. Hafatra virosy sandoka tsy dia fahita firy izay nantsoinay hoe message ransom.
Tsy dia fahita firy ireo satria tsy tena miasa izy ireo ary tokony ho moana ho azy ireo ianao. Saingy ...
fa ny hafatra avotra dia rehefa mahazo hafatra pop-up milaza ianao fa voajirika ny solosainao ary mila mandoa vola ianao hanamboarana azy. Avelao aho hivezivezy eto: Nilaza aho fa tokony ho adala ianao raha milatsaka amin'izany, fa ankoatr'izay, nahita olona sasany tamin'ny internet nianjera ratsy kokoa aho. Ka ...
Heveriko fa misy zavatra iray amin'ny ankamaroan'ny fotoana tsy misy ilàna azy ireo hafatra ireo ary azo sorohina amin'ny alàlan'ny famerenana fotsiny ny solosainanao. Na izany aza, raha averinao indray ny solosainao ary mbola eo ny hafatra avotra, na raha manakana anao tsy hiala amin'ny programa sasany amin'ny solosainao ny hafatra avotra dia mety hahita olana ianao. Samy mankahala pop-ups ny tsirairay, miaina izany ny rehetra, ary mankahala azy rehetra.
Tsy misy maharatsy an'izany, fa raha mahazo pop-up matetika ianao dia misy zavatra tsy mety. Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny zavatra voalohany mazàna ataon'ireo mpijirika rehefa miditra an-tsokosoko amin'ny solo-sain'olon-kafa izy ireo dia ny fampandehanana ny rindrambaiko antivirus sy popup blocker. Raha mahazo safo-drano amin'izy ireo ianao dia manomboha manamarina ny toe-javatra misy anao satria nisy niova angamba ary raha tsy mbola miverina amin'ny isa 10 isika ary mazava ho azy fa misy zavatra miaraka amin'ny solosainao voarohirohy amin'ny teny miafinao dia tsy mandeha tampoka intsony izany. .
Mazava izany, saingy sainam-mena be koa izany raha mandeha any amin'ny kaontinao amin'ny media sosialy na kaonty an-tserasera hafa ianao ary tampoka tsy mandeha ny tenimiafinao, sahirana ianao manala ny tena olona amin'ny kaontiny amin'ny fanovana ny teny miafina Ka ny tiako holazaina fotsiny dia hoe fitsipika ankamantatra, ovay foana ny teny miafinao ary fantatro fa tsy mandeha izany, fa hiteny foana aho hoe: aza mampiasa fampahalalana manokana momba ny teny miafinao, aza mampiasa fitsingerenan'ny andro nahaterahana, anaran-janaka, ray aman-dreny anarana na zavatra toy izany. Ataovy lalim-paka, sarotiny, sora-baventy, sora-baventy, tandindona ny teny miafinao ...
ny mahasarotra kokoa no tsara kokoa. Vahao ny Top 5: Misy rindrambaiko napetraka izay tsy nekenao. Ny ankamaroan'ny solosaina dia tsy hisintona rindrambaiko raha tsy ekenao na alahatrao aloha.
Na izany aza, raha manomboka misintona ilay rindrambaiko tsy misy fampandrenesana na fanentanana hahazoana fankatoavana dia mila ajanonao avy hatrany izany. Azo antoka, indraindray ny solosainanao dia manao hadisoana fotsiny ary misintona fanavaozana mahazatra. Angamba fampivoarana tselatra na fanavaozana Microsoft na zavatra hafa toa izany nefa tsy milaza aminao aloha, fa raha manomboka misintona zavatra avy amin'ny loharano tsy misy fankatoavana ianao dia manome toky anao aho fa misy zavatra tsy mety ary fantatro fa ny ankamaroany dia fampahalalana fototra hoe isika mandalo.
Fa ho gaga ianao hoe firy ny olona mahazo an'io isan'andro. Araraoty izany fa aza mijery ny fototra. Amin'ny laharana fahefatra: fitadiavana tranonkala alefa.
Famantarana fampitandremana lehibe iray hafa dia rehefa alefa amin'ny tranokala kisendrasendra ianao rehefa mijery Internet. Satria izany no fiasan'ny antivirus, virus maro no tsy maintsy apetrak'ilay mpampiasa amin'ny tanana, izay matetika mahatonga ny mpijirika hamitaka anao amin'ny fikitihana ny virus-n'izy ireo. Ny sainam-mena lehibe dia rehefa alefa any amin'ireo tranokala spam ianao matetika rehefa tsy ninianao natao ary efa nankeo amin'ireo tranonkala ireo ianao izay nanindry zavatra na tsindrio eto ary naterina ho azy tamin'io pejy io ianao izay mazava ho azy fa tsy azo antoka. , ary izany rehetra izany ihany, mandeha daholo ny buzzeranao, ny faneva mena anao 5.
Rehefa mitranga izany dia jereo tsara ny toerana misy anao ary zahao raha nisy niova na nisy nanimba ny rafitrao Ary ny laharana fahatelo: manana boaty vaovao ny browser-nao. Eny, efa hitantsika avokoa ireo fitaovantsika na ankafizintsika niova tsy nahy na voafafa tamin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy. Tena mahasosotra tokoa izany satria raha tsy hamafana ny boaty ianao dia mahazo baraovana vaovao.
Manana navigateur default vaovao ianao. Miseho amin'ny ambaratonga lehibe kokoa izany Mety mila manao fikarohana ianao Mazava ho azy, rehefa mametraka rindrambaiko sasany ianao, ny tranokalan'ny tranonkalanao dia -Misy fanavaozana ireo boaty misy anao napetraka ao amin'ny Favorites, fa raha tsy misy fampitandremana izany fanovana izany. , na raha misy zavatra ampidirina amin'ny toolbar anao na tianao indrindra dia raketo eo noho eo ny solosainanao ary avelao izy hijery na hanao izay ilainao amin'ny programa malware mba hahazoana izay ilainao satria rehefa ampiana sy esorina ny zavatra nefa tsy ataonao ara-batana dia misy hery lehibe kokoa miasa ao anatin'ny solo-sainanao, mpijirika madinidinika, troll demony no ao ary mety ho eo am-pelatanan'ny famoahana ny entanao ianao. Izany dia mitranga matetika amin'ny Facebook, saingy tsy midika izany fa tsy mampidi-doza izany. Tsy tokony hisy olona afaka mandefa hafatra amin'ny kaontinao fa ianao.
Angamba ianao nanindry doka na nankatoavina tamina fampiharana tsy nahy tao amin'ny Facebook, fa na inona na inona antony mety hitranga, raha mitranga izany dia mila manova ny teny miafinao ianao ary manamarina eo no ho eo ny fikirakiranao. Masiaka ireo mpijirika ary manjono an'ireo tsy ampoizina ary maro amin'izy ireo no misy, ny tiako holazaina, indrindra amin'ny Facebook, ary mazava ho azy fa hataoko amin'ny fomba sasany izany, amin'ny filazako fa fanamarinana dingana 2 vetivety fotsiny amin'ny zavatra rehetra azonao atao Ka angamba misy lalan-kivoahana raha misy hantsana Mazava ho azy fa raiso izy ary manitatra, fomba iray lehibe ho an'ireo mpijirika dia amin'ny alàlan'ny karatra SIM amin'ny alàlan'ny findainao. Ka alao antoka fa fantatry ny mpanome anao telefaona fa mila kaody roa na karazana kaody PIN ianao raha tsy misy afaka miditra amin'ny telefaoninao satria io no fomba hidirana amin'ny kaontinao rehetra.
laharana voalohany amin'ny lisitra androany, ary ity dia fomba tsara iray hahafantarana raha nisy voajirika ny solosainanao. Eny ary, ny totozinao dia mihetsika hatrany amin'ny safidiny manokana. Ie, raha izany no mitranga, dia voafitaka ianao, tantely.
Tsy misy zavatra hafa mety hitranga raha misy olona miantso an-telefaona ao anaty solosainao ary voafehiny ary tsy eo amin'ny mpijery ekipa miaraka amin'ny sakaiza fantatrao ianao, angamba tara loatra izany. Vita, voafitaka ianao. Ataovy izany ry namako, ireto misy fomba 10 hijerena raha voajirika tokoa ny solosanao.
isa bokotra xbox
Tahaka ny nolazaiko, maro amin'izy ireo no tsotra ary maro aminareo angamba no efa mahalala azy, fa misy kosa ny olona tsy mahalala na inona na inona ary voafitaka amin'ny hacked '. Azontsika atao koa ny mampifandray an'io, mamelona ny fampandrenesanao, eto ambany ny lisitry ny lahatsoratra lisitry ny lisitra hafa rehetra ato ho ato, ary misy rohy ho anao mba handefa hevitra momba ny zava-mitranga amin'ity takariva farany ity. Ny andian-alina dia mety amin'ny folo voalohany na quiz mahazatra momba ny zavatra rehetra.
Tsy maninona izany fa vao mainka mahafinaritra. Manantena aho fa nankafizinao izany, antenaina fa hanampy olona sasany io, ary hahita anao rahampitso alina ho an'ny vaovao.
Inona no mitranga rehefa mamafa ny kaontiko Skype aho?
Eo amin'ny fikandrana Vonona hanidy, vakio mandra-pahatakatra izay ho very ianao rehefa voafafa ilay kaonty. Kitiho, Manaraka Raha vao misy fangatahana famafana natolotra, Skype dia handany fotoana kely hanodinana ilay fangatahana ary hamafana ny kaonty, miaraka amin'ireo fifandraisana rehetra sy ireo angona Skype hafa.
Misy fomba iray hamerenana ny kaonty Skype voafafa?
Ny kaonty Microsoft sy Skype dia heverina ho kaonty iray izao. Misy fe-potoana fiandrasana 60 andro alohan'ny hikatonan'ny kaonty tanteraka, mandritra io fotoana io ireo mpampiasa izay te-hanangona ny kaontiny dia mbola afaka mamerina azy io indray. Midira fotsiny amin'ny Skype amin'ny fampiasana ny kaonty Skype / kaonty Microsoft izay namboarina mba hakatona mba hamelomana indray ny kaonty.
Ahoana no fomba hamafana ny Skype amin'ny solo-sain'ny olon-kafa?
Raha miditra amin'ny solo-sain'olon-kafa ianao na tsy te-hiseho amin'ny fampiasa alàlana ny fidiranao dia tsy maintsy mamafa ny folder fampidirana Skype: Tsindrio ilay fandrindrana fototra Win + R2. Ampidiro ny lalana% appdata% \_ Skype ary tsindrio Enter. Tadiavo ary hamafa ny fampirimana izay mitovy anarana amin'ny anaranao Skype.
Ahoana no hamafana hafatra amin'ny Skype?
Mandehana any amin'ny tabilao Chat ary tsindrio ilay resaka misy ny hafatra tianao hamafa. Tadiavo ny hafatra tianao hamafa amin'ny resakao ary tazomy eo ambany ny rantsan-tananao. Rehefa afaka fotoana fohy dia hiseho ny menio iray. Kitiho ny fanesorana ary lasa ny hafatra!